SPANGOLD RETRIEVER DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Spangold Retriever Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Ingiriisiga Xilliga Xilliga Gu'ga ee Isbaanishka / Dahabiraha Dahabka Isku-dhafan ee Dahabiga ah
Puck the Spangold Retriever da 1 sano jir ah— 'Kani waa sawirka Puck oo sanad jir ah oo lugeynaya buuraha Scottish Highlands. Hooyadiis waxay ahayd Spanier Springer aabihiisna wuxuu ahaa Golden Retriever. Waxaan haysanay isaga tan iyo markii uu jiray 8 toddobaad. Isagu waa eey cajiib ah oo tamar iyo jacayl ka buuxo. Isagu waa eeyga ugu jilicsan marka aad gudaha ku jirto, ku fadhiiso dhabtaada iyo koolkoolinta iyo dhunkashada markasta oo ay macquul tahay. Bannaanka isagu waa mid orod badan oo xoog badan! Wuxuu jecel yahay soo-qaadista, socodka kanicross, baaskiil wadista buuraha, dabaasha iyo fuulitaanka buuraha. Waxaan isku dayeynaa inaan ku tijaabino dabaasha toddobaadkan. Isagu waa caqli badan yahay oo amarada ayuu si dhaqso leh u bartaa laakiin waa ula kac marka waa loo baahan yahay in la tababaro Aad ayuu saaxiibtinimo u leeyahay, wuu salaamayaa qof kasta oo uu si xamaasad leh ula xiriiro. '
Spangold Retriever ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Ingiriisi Springer Spaniel iyo Dahab dahab ah . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
'Kani waa Ziggy iyo wiilkiisa Max. Waxay yihiin Spangold Retrievers. Waxay yihiin kuwo aad u jecel oo jilicsan, gaar ahaan leh carruurta . Waxay doorbidi lahaayeen adiga dhabta ka badan wax kasta, (marka laga reebo laga yaabee cunid .) Ziggy waa 10 jir, Maxna waa cunug yar oo 4 bilood jir ah oo sawirkan ku jira. Max momma waa Spaniel Springer saafi ah, (madow iyo caddaan.) '
Francis the Spangold Retriever (Dahabihii Dahabka Ahaa / Isugeyntii Isbaanishka Isbaanishka) markuu 7 bilood jiray— Wuxuu jecel yahay Biyaha wuxuuna jecel yahay banaanka. Caqli badan oo aad u cunno dhiirigeliya laakiin madax adag. Waxay leedahay caado in lagu calaliyo waxyaabo aan loola jeedin in la calaliyo. Ka buuxa tamar iyo shaqsiyad '
Francis the Spangold Retriever (Dahabihii Dahabka Ahaa / Isugeynta Isbaanishka Isbaanishka) markuu jiro 7 bilood
Tucker the Spangold Retriever at 1 sano jir— 'Tucker waa xayawaan aad u daacad ah, aad u caqli badan, qurux badan. Waxaan haystay isaga tan iyo markii uu jiray 12 toddobaad. Haatan waa wiil caafimaad qaba, dhaqaaqo badan, madadaalo leh isagoo hal sano jir ah. Isagu waa kan ugu horreeya ee ka jawaaba albaabka si aan u salaamo martidayda. Wuu i garab taaganyahay marwalba wuuna jecelyahay inuu ka baxo xarigga deyrkayga aan oodan. Wuxuu jecel yahay inuu dabaasho oo uu la ciyaaro eeyaha kale. Wuxuu u socdaa sida inuu yahay eey show leh sharaf iyo kalsooni xad dhaaf ah. Isagu waa arday deg deg ah markay tahay barashada waxyaalo cusub gabi ahaana wuxuu jecel yahay xasilloonida iyo xeebaha !!!
'Kani waa eeygay Blaze oo jira 7 sano. Aabihiis wuxuu ahaa Golden Retriever hooyadiisna waxay ahayd English Springer Spaniel. Isagu aad buu u macaan yahay wuuna ka shaqeeyaa inuu ka farxiyo Wuxuu jecel yahay carruurta wuuna garanayaa goorta uu dabacsan yahay. Wuxuu jecel yahay ciyaarta, khudaarta, koolkoolinta, biyaha iyo socod socod . Waxaan kugula talin lahaa isugeyntaani inay hesho ugu yaraan laba saacadood jimicsi maalintii. Gacan-yare, ujeedadiisu tahay inuu raalli geliyo, wuxuu si dhakhso leh u bartaa oo wuxuu kuu soo kaxaysan doonaa kabahaaga si aad u baxdo oo aad u ciyaarto.
Scamper iyo walaashiisa basbaaska ah basbaas qiyaastii 4 bilood jir ah oo ku fadhiya kursiga fadhiga
Pepper the Spangold Retriever puppy oo qiyaastii jira 4 bilood jir - 'Waxay iyadu ka duwan tahay Scamper's ciyaar, dabeecad furan, xishood badan oo deggan, u hoggaansamaysa illaa heerka saxda ah. Aad u jilicsan oo kalgacal leh. Waxay u badan tahay inay raacdo hoggaanka walaalkeed in badan. Runtii waxay leedahay muuqaal soo-celin ah, marka laga reebo dhogorteeda madow! '
Ku xoq Eyga Spangold Retriever ee qiyaastii 4 bilood jir ah oo leh alaabada uu ku ciyaaro
'Kani waa Scamper, oo ah 10-toddobaad jir ah Spangold Retriever eey. Hooyadiis waxay ahayd qof nadiif ah oo dahabi ah oo Dahab ah aabihiisna wuxuu ahaa Ingiriis Xilliga Isbaanishka ah. Isagu waa qof ciyaar badan, laakiin ma ahan tamar aad u sarreysa, waa sahlan tahay in la tababaro oo u hamuun qabo in uu waxbarto. Aad uqurux badan oo had iyo jeer raba inuu joogo halka ficilku ka jiro! Loo qaaday sanduuqa isla markiiba cabsi la'aan!
Liistada eeyaha Guga Isbaanishka Isbaanishka Isbaanishka
chesapeake bay retriever iyo isku darka shaybaarka
Pyrenees weyn iskudhafka retriever dahabka iibka